Bilaw - Sprachschule Dialog
Wax dheeri ah baro oo habee
Dialog Sprachschule. Wada hadal uun baa luuqaddu ku nooshahay.
Midigta badhtamaha magaalada Karlsruhe, Sprachschule Dialog ee BAMF-la aqoonsan yahay ayaa ku yaal Kaiserstraße oo leh laba xarumood oo tababar oo waasac ah, labadaba Europaplatz iyo Kaiserplatz. In ka badan 30 sano oo waayo -aragnimo u leh qabashada koorsooyinka Jarmalka iyo koorsooyinka is -dhexgalka, waxaan ku baraynaa luuqadda Jarmalka si karti leh maxaa yeelay waxaan dooneynaa inaad awood u yeelatid inaad si kalsooni iyo kalsooni leh ula xiriirto dadka kale ee Jarmalka. Si loo helo nolol wanaagsan, mid gaar ahaaneed iyo mid xirfadeed labadaba. Wac 0721 - 130 59 57 ama nagu soo booqo xarunta Kaiserstr. 186. Waan ku faraxsanahay inaan ku caawino.
Madadaalada waxbaridda - macallimiin leh qalbi iyo nafba waa soo dhoweynayaan.
Ma waxaad tahay macallin wax ku ool ah afka Jarmalka oo leh oggolaanshaha iyo shahaadooyinka habboon? Miyaad ka soocan tahay shaqadaada go'aanka leh ee ardayda iyo kartida dhaqamada kala duwan? Haddii aad xiisaynayso inaad nala barato koorso Jarmal ah, markaa si fudud nala soo xiriir!
Waxaan kuu joognaa adiga! Kooxda DIALOG.
Annaga waxaad ku jirtaa gacmo wanaagsan oo had iyo jeer si fiican ayaa lagula talinayaa. Iyada oo xirfadahayaga laga soo qaatay barbaarinta, aragti ahaan la dabaqay Sociology, luqadaha iyo naqshadeynta & suuqgeynta, waxaan ku qaabaynnaa maalmaha dugsigaaga faham iyo u damqasho xaaladdaada.
Macluumaad ku qoran luqado kala duwan
Akhri waxa ay dhaheen ardayda qalin jabisay:
Waxaan ku qaatay koorsada Jarmalka A2-B1 wadahadal waxaan khibrad fiican u lahaa dugsiga. Waxaad leedahay shaqaale fiican oo waxtar leh. Waxaan kaliya ku talin karaa dugsiga.
Waxaan aaday dugsiga luqadda Dialog si aan xaaskayga uga diiwaan geliyo koorsada Jarmalka. Waxa nalagu qaabilay si kalgacal leh iyo jawaabaha su’aal kasta iyo madmadow, ma odhan karo tan dugsiyada kale. Waxaan kula talinaynaa dugsiga kalsooni weyn. Xaaskeyga aad bay ugu faraxsan tahay oo ku qanacsan tahay koorsada Jarmalka.
Markii aan bilaabay iskuulka kuma aanan hadli karin eray Jarmal ah. Maanta, waxaan u mahadcelinayaa xirfadda macalimiinta iyo shaqaalaha dugsiga, waxaan awoodaa inaan ku shaqeeyo Jarmal.
Macalimiinta waa mid gaar ah oo wax walba si faahfaahsan ayay iigu sharraxday. Macalin aad u tixgelin iyo fahan badan. Xoghaynta iyo madaxduba waa isfahan. Waan ku qanacsanahay waana dugsi luuqadeed oo aan ku talin karo.
Wanaagsan: isgaarsiinta, xirfadda, tayada "Dialog" waa koorsadaydii koowaad ee luqadda ee Jarmalka !!! Anigoo kaashanaya macallimiintan, waxaan ka adkaaday cabsidii aan ka qabay barashada luqad cusub, oo aad uga adag. Waad ku mahadsan tahay samirkaaga! Waxaan kuu rajaynayaa guul kasta iyo arday badan oo dadaal badan!
Waxaan wax ku bartay Dialog Schule oo aan ku baasay imtixaankii. Waxaan dareemay raaxo badan dugsigan oo aan la kulmay dad badan oo wanaagsan, laga bilaabo xoghayaha ilaa macalinka. Waxaan kula talinayaa dugsiga qof kasta oo raba inuu barto Jarmal oo isku mar dareemo guriga. Waad ku mahadsan tahay wax walba.